Dhaqdhaqaaq Ciiddan oo laga dareemaayo gobolka Jubbada hoose | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Dhaqdhaqaaq Ciiddan oo laga dareemaayo gobolka Jubbada hoose
Dhaqdhaqaaq Ciiddan oo laga dareemaayo gobolka Jubbada hoose
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose, ayaa sheegaya in Ciiddamadad Dowladda Somalia ay Dhaqdhaqaaqyo ka wadaan Deegaano hoostaga Gobalkaasi.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka oo la hadlaayay Shabakadda Soomaalidamaanta ayaa sheegay in Ciiddamadad Dowladda ay qorsheynaayan inay la wareegan Degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe.
Wuxuu sarkaalka sheegay in Ciiddamadda ay manta billaabeen howlgal ay ku doonayaan inay kula wareegaan degmada, isagoona sheegay in Degmadaasi ay muhiimad gaar ah u leedahay Dowladda Somalia.
Dhaqdhaqaaqa ayaa waxa uu yahay mid laga dareemaayo gabi ahaan Gobolka Jubbada hoose, iyadoona la arkaayo Ciiddamo ka tirsan kuwa Dowladda Somalia oo raxan raxan iyo gawaari kula gaafwareegayo gudaha Maggaalladda taasoo Cabsi ku beereyso Dadyowga ku nool gobolka Jubbada hoose.
Dhanka kale, Maxamuud Qaalib oo ka mid ah Saraakiisha Ciiddamadad oo la hadlaayay Warbaahinta ayaa dhankiisa ka sheegay in ciidamo ka tirsan oo ka baxay deegaanka Goobweyn oo 15 km waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ay hadda ku sugan yihiin Buulo-gaduud, kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay inay Al-Shabaab kala wareegaan Jilib.
Si kastaba ha ahaatee, Shacabka ku nool Deegaanka Jilib, ayaa wada barakacyo ay kaga cararaayan waxyeelo kasoo gaarta dhanka Weerarada ay qorsheynaayan Ciiddamadda Dowladda inay ku qaadan Deegaankaasi.
Previous articleNin Soomaali ah oo noqdey Afrikaankii ugu horeeyey ee madax ka noqda Red Cross
Next articleSafiirka soomaaliya ee turkiga oo beeniyay warbixin ee qoreen weibsiteyada qaarkood